DHDOLL - ezigbo ezigbo DHDOLL, LIFELIKE DHDOLL Sex Dolls Official Reseller - Urdolls
Xiaoyu - 141cm Nwoke Mmekọahụ Nkịta Silicone Isi siri ike Tpe Isi Wig Big amụ
Pony - 141cm zuru oke nwa bebi mmekọahụ ụmụ bebi nnukwu amụ
Omar - 141cm Nwa Nwoke Tpe nwa bebi nwere nnukwu mmekọahụ
Ekpebisiri ike imepụta nwa bebi nwoke na nwanyị kacha mara mma n'ụwa - DHDOLL
DHDOLL nwere nnukwu onye nrụpụta nwa bebi na -ejikọ mmepụta, nyocha na mmepe, na ire ahịa. Ndị otu ọkachamara anyị na -ahụ maka ngwaahịa DHDOLL ejiri aka mee. Nwa bebi a haziri ma mepụta bụ nke ejiri polymer TPE eme ihe roba na ihe silicone. Ha bụ ndị enyi na gburugburu ebe obibi na anaghị egbu egbu. Ndị European Union kwadoro ha maka mbupụ ya. Nwa bebi mmekọahụ dị mfe nhicha na enweghị ogwu pụrụ iche. Isi imi, ike siri ike na mmetụta aka dị mma.
Eke:DHDOLL Style: Nwa bebi nwoke nwoke, Obere nwa bebi mmekọahụ, nwa bebi ịhụnanya, na ndị ọzọ
ihe: Nwa bebi TPE
Okwu Mmalite ： DHDOLL bụ ihe ezi uche dị na ya na ọkwa nka. DHDOLL bụ ezigbo onye nrụpụta. Ị nwere ike kwenyesie ike na ị ga -azụta nwa bebi ndụ dị ka ndụ, ngwaahịa ndị ahụ ga -eme nyocha siri ike iji wee nweta ogo na ịdị mma nke ndị ahịa tụrụ anya ya. Ndị ahịa zụrụ na -eche na enwere ike iji nwa bebi DHDOLL nke nwoke na nwanyị na nchịkọta nka!
+ Ọkpụkpụ ohuru nhọrọ: okpukpu abụọ, shrug ..